« Ny Fanahy Masina: mampifankahazo sy mampihavana » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
ALAHADY 31 MEY 2020
Asa. 2, 1-11 ; 1Kor. 12, 3b-7. 12-13 ; Jo. 20, 19-23
Andro lehibe ho an’ny Fiangonana kristianina ny andron’ny Pantekoty. Andro nandraisan’ireo Apostoly ny Fanahy Masina tamin’ny fomba manokana ; andro nahaterahan’ny Fiangonana tamin’ny fomba mahagaga. Tantarain’ny vakiteny voalohany anio ny zava-nitranga tamin’ireo Apostoly tamin’io andron’ny Pantekoty io. Ny fomba nidinan’ny Fanahy Masina tamin’izy ireo sy ny akon’izany tamin’ny Fiangonana mandraka ankehitriny. Averin’ny evanjely tantaraina ihany koa ny nanomezan’i Jesoa tafatsangan-ko velona ny Fanahy Masina ho an’ireo apostoly tamin’ny takarivan’ny Paka sy ny akon’izany teo amin’izy ireo.
« … ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra nifofofofo mafy… ». Ny rivotra nifofofofo sy ny feo avy any an-danitra ary ny lela mitarehin’afo dia fambara mampiseho an’Andriamanitra Mahery, toy ny zava-nitranga tany an-tendrombohitra Sinaia fahiny (Eks. 19, 18). Ny fifankahazoana fitenenana indray dia fambara mampiseho ny mifanohitra amin’ny zava-nitranga fahiny tamin’ny tantaran’ny tilikambon’i Babela (Jen. 11, 1-9). Tsy nifankahazo resaka intsony ny olona kanefa nony feno ny Fanahy Masina ireo Apostoly ka nanomboka niteny dia azon’ny olona nihaino na dia samy manana ny fiteniny avy aza izy ireo. Azon’ny tamin’ny fiteny samihafa ny toritenin’ireo Apostoly.
« Rahefa nilaza izany Izy dia nitsoka ka nanao tamin’izy ireo hoe : Raiso ny Fanahy Masina ». Fa tantarain’ny evanjely androany ny fomba hafa nanomezan’i Jesoa ny Fanahy Masina ho an’ireo mpianany. Ny harivan’ny andron’ny Paka ihany, hoy ny evanjely, raha mbola nihidy aman-trano noho ny fatahorany ny Jody dia niseho tamin’ny mpianany i Jesoa tafatsangan-ko velona. Nitondra fiadanana Izy : « Homba anareo anie ny fiadanana !», nitondra hafaliana ihany koa: « faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo ». Namindra ny iraka tamin’izy ireo Izy : « Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa » ; ary ho fehin’izany rehetra izany dia nanome ny Fanahy Masina : « Rahefa nilaza izany Izy dia nitsoka ka nanao tamin’izy ireo hoe : Raiso ny Fanahy Masina ». Tahaka ilay Fofon’ain’Andriamanitra namelona an’i Adama, vovon-tany fahiny (Jen. 2, 7), ny Fofon’ain’i Kristy nomeny hamelombelona indray ireo mpianany. Fahefana lehibe ihany koa no noraisin’ireo mpianatra tamin’ny fandraisana ny Fanahy Masina dia ny famelana ny fahotana : « ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela ary izay ho tananareo dia ho voatana ».
Nandray ny Fanahy Masina ny Apostoly tamin’ny takarivan’ny Paka ka nahazo hery sy fiadanana. Nomen’i Jesoa azy ireo ny Fofon’ainy mba hamelombelona azy ireo sy nahatonga azy ireo ho manam-pahefana manoloana ny fahotana. Feno ny Fanahy Masina ihany koa izy ireo tamin’ny andron’ny Pantekoty. Nahazo hery vaovao sy fahazavana momba ny finoana an’i Jesoa tafatsangan-ko velona izy ireo ka sahy nijoro teo anatrehan’ny foko amam-pirenena maro hanambara fa i Jesoa, ilay avy any Nazareta, no Kristy. « Tsy misy afa-milaza hoe : ‘i Jesoa no Tompo’, hoy Md Paoly, raha tsy amin’ny Fanahy Masina » (vakiteny faharoa, 1Kor. 12, 3b).
Misafotofoto ny rivo-piainana ankehitriny. Toa tsy mifankahazo sy mifampiahiahy indray ny olombelona. Very ny fihavanana sy ny fifankatiavana ary ny firaisan-kina. Tsy fantatra be ihany ny hoavy. Ny finoana ny herin’ny Fanahy Masina anefa no hanazava ny lalana. Ny herin’ny Fanahy Masina no hampitony ny safotofoto. Ny herin’ny Fanahy Masina no hampiombona sy hampihavana ary hampifankahazo ny mpiara-belona indray.
« Avia, Ry Fanahy Masina, aidino avy any an-danitra ny tsirim-pahazavanao. Avia, ry Rain’ny ory, avia, ry mpizarazara ny soa, avia, ry mpanazava ny saina. Ry fahazavana mahasambatra o, idiro hatrany anatiny indrindra ny fon’ny mpino. Itondray fiadanana, ivimbino hafaliana ».